Katy Perry ပြီးသားမသင့်လျော်ဖြစ်ခြင်း၏စွပ်စွဲထားပြီး - လူတွေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "Katy Perry မသင့်လျော်ဖြစ်ခြင်း၏စွပ်စွဲထားပြီး - လူတွေ
ဒါကလုယူသောအား Josh Kloss မော်ဒယ်ကနေမက်ဆေ့ခ်ျကိုခဲ့သည် Instagram ကို တနင်္ဂနွေကျော်အဆိုတော် Katy Perry သူမ၏ "ဆယ်ကျော်သက်အိပ်မက်" ဗီဒီယိုအတွက်ပူမြင်ကွင်းများဖျော်ဖြေ, 2010 အတွက်အတူတကွအလုပ်လုပ်ပြီးနောက်လူမှုရေး event မှာသူနှင့်အတူမလုံလောက်ခြင်းနှင့် Non-ကြည်ကြည်အဆက်အသွယ်ခဲ့ဟု။ Kloss ဟာပေါ့ပ်ကြယ်ပွင့်လူအစုအဝေးအားမိမိလိင်အင်္ဂါဖော်ထုတ်ရန်သူ၏ရွရွပြေးဘောင်းဘီနှင့်သူမ၏အတွင်းခံကိုဆင်းနေတဲ့ပါတီမှာသူ့ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
"သင်ငါသနားစရာနှင့်ရှက်ခံစားခဲ့ရပုံကိုစိတ်ကူးနိုင်သလား? မိမိအစွပ်စွဲချက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအာဏာယောက်ျားကောက်သောသက်သေပြဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်သောကွောငျ့ "ကျွန်မအခုကပြောကြသည်။ သို့သော်ထိန်းသိမ်းအာဏာကိုအမြိုးသမီးမြားအညီအမျှစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ဖြစ်၏။ "
ပယ်ရီလူသိရှင်ကြားစွဲချက်ဆွေးနွေးတင်ပြမထားပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပရိတ်သတ်လှုပ်ရှားမှု #MeToo ၏ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်များသငျ့လျြောနှင့်စွပ်စွဲချက်စေဖို့ ", အလေးချိန်လိုက်ဖမ်း" ၏ Kloss စွပ်စွဲထားသည်။ ထိုနောက်, လူသိရှင်ကြားနှင့်ပြ သ. ရနှင့် mannequin ရရှိနိုင်ရန်အတွက်
ဂျော်နီ Wujek ဟောင်းအတိုင်ပင်ခံ "အမေရိကန် Next Top Model ကို" ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် Kloss တို့ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါတီ၏ဂုဏ်အသရေ၏ဧည့်သည်, ထိုမော်ဒယ်၏မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပေါ်တွင်ရေးသားခြင်း, Kloss ၏စွပ်စွဲချက်ရှုတ်ချ, "မအိုး, ဘုရားသခငျ ။ ... Katy လိုတစ်ခုခုလုပ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။ "
အဆိုပါလက်ဝတ်ရတနာဒီဇိုင်နာ Markus Molinari, ပယ်ရီ၏အခြားသူငယ်ချင်းကိုလည်းမော်ဒယ်အဆိုတော်နှင့်အတူ Romantic အစွဲအလမ်းသော post ကို Kloss အပေါ်ရေးသားခဲ့သည်။ "သင်အခြားမည်သည့်အလုပ်နှင့်တူအလုပ်အတွက်ပေးဆောင်ခဲ့ကြပေမယ့် Katy နှင့်သင်၏စွဲအခြားအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီ" Molinari ကပြောပါတယ်။ "ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှလဲလျောင်း Stop နှင့်သင့်အသက်တာ၌ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှာပါ။ အပေါ်ရွှေ့ပါ။ "
ဒါပေမယ့်တခြားဝေဖန်သုံးသပ်အပိုဒ် Kloss ဒီပယ်ရီလည်းဆွဲဆောင်မှုသို့မဟုတ်ယောက်ျားနှင့်အတူပင်လိင်မသင့်လျော်ဖြစ်ခြင်း၏စွပ်စွဲကြောင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
တကယ်တော့ပယ်ရီအများဆုံးထိခိုက်မခံတဲ့အမြိုးသမီးတဦးကိုရှိခြင်းသည်မိမိစာနယ်ဇင်းများ၏ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ၏ 16 ရာသီ၏တရားသူကြီးတစ်ဦးအဖြစ်သူ၏အချိန်ကာလအတွင်းပြိုင်ဘက် "American Idol ။ "
ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ သင်တစ်ဦးကမိုဘိုင်း device ကိုအပေါ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်ပြဿနာများရှိပါက။
အထူးသ, ပယ်ရီမိန်းကလေး 19 နှစ်ပေါင်းနမ်း။ သူမတိုင်မီနမ်းခဲ့ဖူးကြောင်းဖော်ပြပြီးနောက်သဘောတူညီချက်မပါဘဲဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား glaze ပြိုင်ဘက်။ အဆိုပါငွေရှင်းကောင်တာတွင် Enid, ဥက္ကလာဟိုးမားသူစုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်, သူသည် "ဟုဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းမရှိပဲမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုနမ်းမရ" နိုင်ကြောင်းဘယ်တော့မှခဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲမတ်လ 2018 ကာလအတွင်းကဆိုသည်။
ပယ်ရီကိုသူပါးပေါ်မှာနမ်းခဲ့ထင်သောအရာကိုပြော glaze ရတာပဲဒါပေမယ့်ပေါ့ပ်ကြယ်ပွင့်ကိုနောက်ဆုံးမိနစ်မှာမိမိခေါင်းကိုလှည့်နဲ့သူ့နှုတ်ခမ်းအပေါ်တစ်ဦးထား
အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ထိုကဲ့သို့သောပယ်ရီအဖြစ်အမျိုးသမီးကြယ်များတစ်ခုထက်နှစ်ဆစံရှိရှိမရှိ၏မေးခွန်းကိုအပေါ်တစ်ဦးဆွေးနွေးမှုမှုကိုခံလိုက်ရတယ်။ တဲ့ pop အဟောင်းတွေအထီးကြယ်ပွင့်နမ်း 19 နှစ်ပေါင်းတစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလိမ်လည်လှည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြည့်ရှုပါကချစ်စရာကောင်းကိုရှာဖွေမယ်ဆိုရင် Twitter ပေါ်တွင်တချို့ကမေးတယ်။
တစ်ဦးကိုကြည့်ရှုသူများ "ဒါဟာတစ်အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ရပ်ခဲ့" ဤတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ တစ်ဦး tweet "American Idol" ရန်။ ကအထီးတရားသူကြီးမှလာလျှင် "ဆိုပါစို့။ @Katyperry သူ #metoo လှုပ်ရှားမှုဘာမျှမယူခဲ့သလဲ "
glaze New York Times ကိုပြောသည် သူကလိင်နှောင့်အယှက်မခံစားရဘူး။ သူမသူ့ကိုနမ်းနိုင်လျှင်ပယ်ရီကိုမေးမြန်းခဲ့ကြပါလျှင်သို့သျောလညျး, သူက "အဘယ်သူမျှမ ... ငါချက်ချင်းမသက်မသာဖြစ်ခဲ့သည်။ " ဖြေကြားခဲ့ကြလိမ့်မယ်
The New York Times ပယ်ရီ glaze အပေါ်အတင်းအကျပ်နမ်း "ဟုယခင်ခေတ်ထဲမှာပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှု၏သာယာသောအခိုက်ဖန်တီးနိုင်ကဆိုသည်။ "
သို့သော် # Metoo ပြီးနောက်, နမ်း "exploits" လှည့်ပင် "အဓမ္မ"Slate စာရေးဆရာ Christina Cauterucci ပြောပါတယ် ။ "အပျော်အပါးနှင့်သုခချမ်းသာတဲ့အခိုက်အဖြစ်ဆက်ဆံဖို့ ABC ရုပ်သံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် - နှင့်ပြပွဲကြော်ငြာရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင် - ထူးဆန်း obtuse ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါဖြစ်စဉ်များအတွက်, Cauterucci "American Idol" နှင့်ပယ်ရီသည်သူ၏ flirtation အပြုအမူနှင့်သွယ်ဝိုက်ရည်ညွှန်းသို့အထီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်အတူ "မဆုတ်မနစ်" ကိုကြည့်ဖို့ဆက်လက်ကြောင်းပြောပါတယ်။
နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွဲ Trevor Holmes ကြားနာ, 27 နှစ်ပေါင်းအဆောက်အဦး၏အလုပ်သမားထံအပ်နှံခဲ့သည်ပယ်ရီကြောင်းကျော်ကြားမှုသူ၏မေတ္တာတော်ဝန်ခံခဲ့သည်။ ကေတီဟုမ်းတရားသူကြီးရှေ့အခါ, ပယ်ရီ ", သင်နိုင်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲ" ဟုပြောသည်နှင့်အကြံပြု: "သင်ဟောလိဝုဒ်မှမသွားလျှင်, သင် Los Angeles ကိုငါနှင့်အတူ လာ. နိုင်ပါလိမ့်မယ်" ဟုသူမကဦးဇော်လင်းကဆိုပါတယ် အကြံပြုချက်များ။ ဒါဟာဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့် tools တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ "
ပယ်ရီ လည်းပါသေးတယ် ဂျော်နီ Brenns အမည်ရှိပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ 18 နှစ်ပေါင်း။ "တဆယ်ရှစ်၏မိန်းကလေးများစားဟုသူမကဆိုသည်။ ပြပွဲတွင်, သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်, လုကာ Bryan, ပရောပရည်ရပ်တန့်ဖို့သူ့ကိုမေးရတယ်။ သူမသည်သညျကားဖြင့်ပယ်ချ "။ တစ်ဦးက cougar 32 နှစ်ပေါင်းကိုစား"
"American Idol" ပယ်ရီ၏အပြုအမူကို "ကြီးမားသောဟဲလို" ဖြစ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ပျော်စရာင်ဟု၏ဆင်ခြေအောက်မှာမိန်းမနှင့်အနည်းငယ်လည်းကောင်းသောသူအကြီးတန်းအချင်းလူသား, flirtation ကိုက်ညီတဲ့နိုင် အန္တရာယ်ကင်း။
Kloss ယျတျောနှငျ့အတူပယ်ရီ၏စွပ်စွဲချက်လုပ်ရပ်များအန္တရာယ်ကင်းခဲ့ကြသည်သည်ဟုမထင်ခဲ့ပေ။ မိမိအ Instagram ကိုပို့စ်တွင်, မိမိအာဏာကိုအားကောင်းမောင်းသန်အဘို့အကျော်ကြားပေါ့ပ်ကြယ်ပွင့်ကမ္ဘာ၏လိင်နှင့်အဆင့်အတန်းကိုအသုံးပြုတဲ့သူတစ်ဦးထင်ရှားသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖော်ပြခဲ့သည်။ သူဟာအတွေ့အကြုံအားဖြင့်နှိမ့်ချခဲ့ပြီးသူက "တစ်ဦးကိုပြည်တန်ဆာကဲ့သို့" ခံစားခဲ့ရကဆိုသည်။
တွင် အခြား post ကို Instagram ကို သူဟာပယ်ရီဆန့်ကျင်သည်၎င်း၏စွပ်စွဲချက်များ၏အားသာချက်ယူရှာသောငြင်းဆိုခဲ့သည်။ "ငါသည်လူတိုင်းကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အလင်းကိုနှစ်ဦးစလုံးဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ" ဟုသူကရေးသားခဲ့သည်။
ပုံရိပ် "ကျွန်မရဲ့ PC ကို minimize နှင့်သူ၏ကာကွယ်ပေးရန်ပေါ်နေခဲ့ရတယ်", "Kloss ကဆိုသည်။ "ကျွန်မနား ထောင်. ငါကောင်းတစ်ဦးကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ်ဦး၏ပုံရိပ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆင်ဆာကြသောအခါကြောက်လန့်ဆက်ရှိနေသေး။ ... ထိုအသငျသညျတို့သညျဤကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ကွီးစှာသောဘေးဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးထက်ပိုသန်းကြိမ်နားထောင်ကြလော့။ ဤအတောအတွင်းသမ္မာတရားကိုသင်တို့အားငါသိ၏။ ပါဝါမသက်ဆိုင်ကျား၏, ကျော်ယူအကျင့်ပျက်ခြစားမှုသည်အဘယ်အရာခွင့်ပြုပါတယ်။
Meghan Markle သင်ခန်းစာသီးသန့်လုံခြုံရေး EC အတော်ဝင်သင်ယူဖို့ရှိပါတယ် - "ဖြေလျော့ပေးခြင်းများနှင့်သာမန်"